Archive du 20180703
Maurice Tsihavonana Homamiadan’ny tsinay no nahafaty azy
Banga ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Taorian’ny nahafatesan-dRandriatsitohaina Charles, lehiben’ny vondrona Ultima Media ny sabotsy teo ary nalevina omaly dia namoy ny ainy omaly maraina teny amin’ny Hopitaly HJRA
Datim-pifidianana Manaja lalàna io, hoy ny CENI
Andraikitra lehibe tsy maintsy hiantsorohan`ny governemantan`ny marimaritra iraisana ny fanatontosana ny fifidianana ao anatin`ny fotoana fohy.
Ravalomanana sy ny TIM Vonona hiatrika fifidianana
Efa nambaran’i Marc Ravalomanana hatry ny ela fa na haroso io na hahemotra dia vonona hatrany ny TIM amin’ny fifidianana.
Fitakiana sy fitokonana eny Ankatso Mitohy ary mihamafy hatrany
Samy manana ny fitakiany ny mpampianatra mpikaroka (SECES), ny mpandraharaha ary ny mpianatra eo anivon’ny oniversiten’Antananarivo, fa eo ihany koa ny fitakiana itambarana.
Miangatra ny fanjakana Sendika maro no hanatevina ny tolona
Vao mainka nampiakatra ny hambom-pon’ny sendika maro, toy ny sendikan’ny mpampianatra mpanabe, S3MF (Sendikan’ny Mpampianatra Mpampiofana avy amin’ny sehatry ny Fampanan’Asa sy ny fampianarana ara-teknika ary fanofanana arak’asa), FM2F (Mpiasan’ny Fanabeazana manerana ny nosy), ny CNAPMAD, ny CNaPS,…
Plaky mena ho an’ny fiaram-panjakana Homena iray volana hanovana azy
Hentitra ny praiminisitra Ntsay Louis Christian raha naneho hevitra tamin`ny fanatanterahana ny fifidianana nandritra ny fandalovany tany Belo Tsiribihina ny faran`ny herinandro lasa teo.
Fananganana ny Kompania-pitateranaTsaradia Paikady hanafoanana ny trosan’ny Airmad
Omaly alatsinainy no nampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato i Tsaradia, Fiaramanidina voalohany hisidina manerana ny Nosy.
Thb Champions League Malagasy 2018 Fantatra ireo tafita hiatrika ny dingana faha-2
Taorian’ny andro faha-5 farany tamin’ny dingana voalohan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny baolina kitra na ny « Thb Champions League Malagasy 2018 »
Mondial 2018 -Ampahavalon-dalana Tafita amin’ny 1/4-dalana i Brésil sy Belgique
I Bresil nandresy an’i Mexique 2-0 sy Belgique nandavo an’i Japon 3-2 indray no tafita amin’ny 1/4-dalana omaly alatsinainy 2 jolay eo amin’ny Mondial Russie 2018 ka hifampitana any amin’ny kianjan’i Kazan amin’ny zoma 6 jolay ho avy izao.
Tandindon’ny fahavelomana ho antsika Malagasy ny rano. Mangidy teo amin’ny fiarahamonina fahagola mihitsy ny nilaozan-doharano.
Loza nitranga teto Antananarivo Nahatratra 57 tamin’ny volana jona lasa teo
Nirongatra sy nahazo vahana ny lozam-pifamoivoizana teto Antananarivo tamin’iny volana jona nivalona iny, raha araka ny tatitry ny borigady misahana ny lozam-pifampivoizana eto Antananarivo ( BAC), omaly.
Anosiarivo Tsiafajavona Nahazo EPP vaovao
23 km miala an’Ambatolampy no misy ny kaominina ambanivohitra Tsiafajavona, any amin’ny Faritra Vakinankaratra.
DREN Vakinankaratra Atahorana ho taona fotsy ny amin’ity 2018 ity
Vao maraina dia nifamotoana teo amin’ny tokotanin’ny DREN Vakinankaratra toy ny mahazatra ireo mpianatra an’arivony omaly.
Building Bridges Manamora ny fifaneraseran’ny tanora
Araka ny voasoritra ao amin’ny tetikasa Building Bridges izay natomboka tany amin’ny Nosy La Réunion ny 3-8 martsa lasa teo, ary notohizana tany amin’ny Nosy Maurice ny 3-9 mey lasa teo, dia natomboka tamin`ny alahady 1 jolay 2018 ny fihaonan’ireo tanora aty amin’ny ranomasimbe Indiana eny amin’ny foiben’ny CEMEAM (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active de Madagasikara) Ankadikely Ilafy.
Taom-baovao Malagasy iraisana 2018 Manomboka ny fanomanan’ny KMTM azy
Manomboka ny fanomanana amin’ny handraisan’i Fianarantsoa ny fankalazana ny taom-baovao iraisan’ny Malagasy any amin’ity renivohitr’i Matsiatra Ambony ity ny KMTM (Komity mpanomana ny taom-baovao malagasy).
Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra Raikitra ny savorovoro
Nikorontana tanteraka omaly ny tetsy amin’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Efa fanao mahazatra isaky ny alatsinainy maraina voalohan’ny volana ny manangan-tsaina.
Vidin-jiron’ny JIRAMA Tsy hiakatra intsony aloha
Tsy hisy fiakarany intsony aloha ny vidin-jiron’ny JIRAMA amin’ity taona 2018 ity, hoy ny minisitry ny angovo Rasoloelison Lanto, tamin’ny mpanao gazety omaly.
Fanajana ny zon’ny mpiasa Mila ezaka Antsiranana , hoy ny CNaPS
Anisan’ireo tanàn-dehibe manana ny toerany amin’ny lafiny ara-toekarena i Antsiranana raha eto Madagasikara.
Fihariana an-dranomasina eto Madagasikara Mitohivakana ny tsy fangaraharana
Taorian’ny savorovoro nisy teo anivon’ny sendikan’ny tantsambo na ny Sygmma dia ry zareo avy eo anivon’ny sendikan’ny mpiasan’ny SMMC na ny orinasa miandraikitra ny fampakarana sy fampidinana ireo entana tonga sy halefa eny anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina indray omaly no naneho ny fitarainany.